Izindaba - Ungahlukanisa kanjani inethiwekhi yokufinyelela ye-optical OLT, ONU, ODN, ONT?
Ungayihlukanisa kanjani inethiwekhi yokufinyelela ye-optical OLT, ONU, ODN, ONT?
Inethiwekhi yokungena yokungena iyinethiwekhi yokungena esebenzisa ukukhanya njengendawo yokudlulisa, esikhundleni sezintambo zethusi, futhi isetshenziselwa ukufinyelela kuyo yonke imizi. Inethiwekhi yokufinyelela ebonakalayo. Inethiwekhi yokufinyelela ngokujwayelekile ngokuvamile inezingxenye ezintathu: i-optical line terminal OLT, i-optical network unit ONU, inethiwekhi yokusabalalisa i-ODN, phakathi kwayo i-OLT ne-ONU okuyizinto eziyinhloko zenethiwekhi yokufinyelela yokungena.
Igama eligcwele le-OLT yi-Optical Line Terminal, i-optical line terminal. I-OLT iyisikhungo sokugcina izintambo esibonakalayo futhi iyisetshenziswa esiphakathi nehhovisi sezokuxhumana ngocingo. Isetshenziselwa ukuxhuma imigqa ye-fiber fiber trunk. Isebenza njengoshintshi noma i-router kwinethiwekhi yokuxhumana yendabuko. Kuyithuluzi emnyango wenethiwekhi yangaphandle nokungena kwenethiwekhi yangaphakathi. Kubekwe ehhovisi eliphakathi, imisebenzi ebaluleke kunazo zonke yokuphatha ukuhlela amasistimu omgwaqo, ukulawula i-buffer, kanye nokuhlinzekwa kwezindawo zokuxhumana zenethiwekhi ezenzelwe umsebenzisi kanye nokwabiwa komkhawulokudonsa. Ukukubeka kalula, kungukufeza imisebenzi emibili. Okwenyukayo, kuqeda ukufinyelela okuphezulu kwenethiwekhi ye-PON; Okwehla komfula, idatha etholakalayo iyathunyelwa futhi isatshalaliswe kuwo wonke amadivayisi we-ONU womsebenzisi ngokusebenzisa inethiwekhi ye-ODN.
I-ONU yi-Optical Network Unit. I-ONU inemisebenzi emibili: ithola ngokukhetha ukusakazwa okuthunyelwe yi-OLT, bese iphendula i-OLT uma imininingwane idinga ukwamukelwa; iqoqa futhi ihlasele idatha ye-Ethernet umsebenzisi okudingeka ayithumele, ayithumele ku-OLT ngokuya ngefasitela lokuthumela elithunyelwe Thumela idatha efakwe kunqolobane.
Enethiwekhi ye-FTTx, izindlela ezahlukahlukene zokufinyelela ze-ONU nazo zihlukile, njenge-FTTC (i-Fiber To The Curb): I-ONU ibekwe egumbini eliphakathi lekhompyutha lomphakathi; I-FTTB (Fibre To The Building): I-ONU ibekwe ku-FTTH (Fibre To The Home) ephaseji: I-ONU ibekwe kumsebenzisi wasekhaya.
I-ONT yi-Optical Network Terminal, iyunithi yokugcina kakhulu ye-FTTH, eyaziwa kakhulu njenge "modem optical", efana nemodemu kagesi ye-xDSL. I-ONT iyi-terminal yenethiwekhi ye-optical, esetshenziswa kumsebenzisi wokugcina, ngenkathi i-ONU ibhekisa kuyunithi yenethiwekhi ye-optical, futhi kungahle kube namanye amanethiwekhi phakathi kwayo nomsebenzisi wokugcina. I-ONT iyingxenye ebalulekile ye-ONU.
Buyini ubudlelwane phakathi kwe-ONU ne-OLT?
I-OLT ukuphela kokuphatha, kanti i-ONU ukuphela kwayo; ukwenziwa komsebenzi kwe-ONU kukhishwe nge-OLT, futhi laba bobabili basebudlelwaneni obuphambili nobugqila. Ama-ONU amaningi angaxhunyaniswa ku-OLT eyodwa ngokusebenzisa isihlukanisi.
I-ODN iyi-Optical Distribution Network, inethiwekhi yokusabalalisa i-optical, iyindlela yokudlulisa ebonakalayo phakathi kwe-OLT ne-ONU, umsebenzi oyinhloko ukuqedela ukudluliswa kwezimpawu ezimbili, imvamisa ngezintambo ze-fiber fiber, izixhumi ze-optical, splitters optical kanye nokufakwa xhuma lezi Ingxenye yemishini esekelayo yedivayisi, into ebaluleke kakhulu i-splitter ebonakalayo.
Isikhathi Iposi: Oct-15-2021
I-Xfp Transceiver, Intengo ye-Huawei Olt, Optical Fibre Module, I-Sfp C ++, Transmitter Wangaphandle Transmitter, IHuawei Qsfp +,